सम्बन्धन दिन फर्जी प्रतिवेदन, यति ठूलो रहस्य बाहिरियो
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्व विद्यालयले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन फर्जी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएको खुलेको छ । चिकित्शासास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का प्राध्यापक डाक्टर करवीरनाथ योगीको स...
ट्याक्सीले सांसदहरुलाई ठगेपछि….
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलको पार्किङमा आइपुगेका सांसद रामअयोधी यादवलाई ट्याक्सीचालकले सोध्यो, ‘कहाँ से आया ? ‘ उनले पनि चालकको मनोविज्ञान बुझेर भनिदिए, ‘बिहार से आ...
काठमाडौं । सुनसरी, धनकुटाका साथै उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको सिमानास्थित सप्तकोसीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण प्रक्रियासँगै प्रदेश १ मा खतरा हुने भएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको छ । सप्त...
काठमाडौं । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन भन्दै संसदको विकास समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका नयाँ संघ–संस्था (समिति) दर्ता र पुरानोलाई नवीकरण नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मुलुकमा यायातात संचालनमा...
यस्तो छ प्रधानमन्त्री देउवाको पाँच दिने भ्रमण कार्यतालिका
काठमाडौं ५ भदौ । पाँच दिने भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार नयाँदिल्ली आउँदैछन्। भदौ ७ देखि ११ गते अर्थात् बुधबारदेखि आइतबारसम्मको भ्रमणका क्रममा देउवाको उच्च राजनीतिक भेटघाटको...
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक मनाङेलाई सफाइ दिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चार वर्षभन्दा बढी समय लगाएर अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले वादीको दाबीअनुसार ...
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन देखाएको कारण अदालतकै पछिल्लो फैसला प्रतिकूल भएको पाइएको छ । यो खबर दीपक दाहालले आजको नागरिकमा लेखेका छन्। सम्बन्धन पाउँ भनी काठमाडौं...
एक सातादेखि सम्पर्क विहीन बाढी प्रभावित एक बस्ती
गएको साता आएको बाढी र पहिरोका कारण दाङको एक बाढी प्रभावित बस्ती सम्पर्क विहीन छ। बबई गाउँपालिका १ (साविको पुरन्धारा गाविस ९) को गंगटे र आसपासको बस्ती एक सातासम्ममा पनि सम्पर्कमा आएको छैन। गंगटे बस्त...
झोलामा खोला राखेर निदाएका कम्पनीको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । चार हजार दुई सय ३२ मेगावाट बराबरको विद्युतको लाइसेन्स लिएका ४१ आयोजना खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । लाइसेन्स लिएका तर उत्पादन अनुमतिपत्रको निवेदन दिए पनि आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेका...
भारतमा आतंक बन्दै आएको ‘चुल्ठो काट्ने’ घटना तराई क्षेत्रमा पनि !
काठमाडौं । भारतको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार हुँदै नेपालमा भित्रिएको महिलाको चोटी (कपालको चुल्ठो) काट्ने घटनाले पर्सा र बाराका महिलामा त्रास छाएको छ । साउन २९ देखि भदौ ३ गतेसम्म पर्सा र बारामा २० ...
प्रहरीमा अख्तियार मोह किन ?
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा हुन प्रहरीमा होडबाजी चल्ने गरेको छ । महाभियोग लाग्दालाग्दै अदालतको फैसलाबाट बर्खास्त भएका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अख्यिारमा प्रहर...
कांग्रेस र माओवादीको सेखी झार्ने रणनीतिमा एमाले
काठमाडौं ५ भदौ । घोषणा हुँदा ९१ प्रतिशत सभासद्को समर्थन पाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा ३५ महिनापछि गर्न लागिएको दोस्रो संशोधनमा दुई तिहाइ समर्थन जुटाउने र जुट्न नदिने खेल पेचिलो बनेको छ...
काठमाडौं । जनकपुरसहित समग्र तराई मधेसको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको नेपालको एकमात्रै रेलसेवा आगामी फागुनदेखि संचालनमा आउने भएको छ । भारतको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै महोत्तरीको विजलापुरासम्म रेलमार्ग ...
सुत्केरीपछिको रक्तस्राव रोक्न फुटबल र भलिबल
काठमाडौं । सुत्केरीपछिको अधिक रक्तस्रावबाट हुने मातृ मृत्युदर कम गाराउन फुटबल वा भलिबलको प्रयोग गरिन थालेको छ । सुन्दै अनौठो लागे पनि यो खेल सामग्रीको प्रयोगले सुत्केरीपछिको रक्तस्राव कम गराउँदै रेफल...
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डुबान समस्याबारे भारतसँग कुरा नगरेकामा शीर्ष नेतृत्वसँग असन्तुष्टि पोखेकी छन् । सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका बाँध÷तटबन्धका कारण तराई÷मधेसका भूभाग डुबा...
डा. केसीले भनेका मेडिकल माफिया को को हुन ?
काठमाडौं । प्रा.डा.गोविन्द केसीले संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको माफियामुखी संस्करण कुनै पनि बेला संसदको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरेर पार...
काठमाडौं । जन्मेको बच्चा मारेको आशंकामा एक किशोर र एक किशोरीलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको छ। दक्षिणी हतुवागढी गाउँपालिका २, घोडेटारका २८ वर्षीय एक स्थानीय निजी स्कुलका प्रिन्सिपल कृष्ण राई र घोड...
के दिए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले देउवालाई सुझाव ?
काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चीन र भारतबीच दोक्लमलाई लिएर भइरहेको तनावका बारेमा नेपाल ‘तटस्थ’ भूमिकामा रहनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । चीन र ...
काठमाडौं । नेपाली सेनाले ११ वटा हवाइ साधन थप्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको खबर आजको कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा छ । आफैंले किन्न लागेको ६ हेलिकप्टर र एउटा जहाज तथा अमेरिकी अनुदानमा प्राप्त हुने ४ स्काई ट्...